Roobkii ka Da’ay Muqdisho oo saameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool Degmada Garasbaaley: | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Roobkii ka Da’ay Muqdisho oo saameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool Degmada...
Roobkii ka Da’ay Muqdisho oo saameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool Degmada Garasbaaley:
Allmareeg.com: Muqdisho- 08 October 2019: Roobkii ka Da’ay magaalada Muqdisho ayaa sameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool Deg. Garasbaaley, oo isugu jira dad Da’ah, caruur iyo haween.
Dadkan oo markii horeba aanan heysan aqalo wanaagsan ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in aqalooda uu ka dumiyay Roobka, waxayna dalbadeen gargaar deg deg ah oo dhan walba isugu jira.
Barakacayaashan qaarkood oo aan heysan aqalo ay ku hoydaan, kuna nool Dallada Liibaanta ayaa sheegay inay walaacsan yihiin saameynta uu ku yeelan karo Roobabka xiga ee soo socda, bacdamaa xilliga Deyrta hada la guda galay.
Guddoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada Garasbaaley mudane C/laahi Cabdi Maxamuud ayaa sheegay in dadkan ay dhibaateysan yihiin, una baahin yihiin gacan qabashada maamulka gobolka Banaadir, dowladda dhexe iyo beesha caalamka.
“Dadkan oo isugu jira kuwa horey u soo barakacay iyo kuwa cusub ayaa ah dad dhibaateysan, ka maamul ahaan wixii tabar ah waan u qabanay, laakiin gargaar caalami ayay u baahan yihiin, cid walba oo dadkan wax ku tareysa waan soo dhaweyneynaa”. ayuu yiri Guddoomiye C/laahi.
Maamulka Garasbaaley ayaa diirada saaray oo waqtigiisa ugu badan ku bixinaya sidii dadka barakacayaasha looga dhigi lahaa deegaan ah, islamarkaana looga saari lahaa hawlaha barakaca.
Previous articleMaxaadan Ogeyn oo Maanta uu sheegay Madaxweyne Farmaajo?
Next articleWasiiro ka socda Xukuumadda Nabad iyo Nolol oo gaaray Boosaaso
maxaa looga hadlay kulankii ka dhacay Xarunta Xalane
Mareeg Ali - December 16, 2018 0
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in shir Xasaasi ah oo looga hadlayay xariga Roobow iyo xiisaddii ka jirtay magaalada Baydhabo uu ka dhacay xarunta...